Hojaarkaan qubee mirkaneessuu
Hojarkaan qubee barruu filatamee ykn galmee guutuu mirkaneessuu dandeessa.
To'annaan qubee iddoo qaree ammee irraa eegala, ykn jalqaba barruu filatamee irraa.
Galmee keessatti cuqaasi, ykn barruu mirkaneessuu barbaaddu filadhu.
Yeroo dogogorri qubeessuu ta'e, qaaqni Qubee mirkaneessuu banuu fi LibreOffice sirreefama wayii kenna.
Qaaqee qubee mirkaneessu
Title is: Hojaarkaan qubee mirkaneessuu